လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်း - နိုး - ရေတံခွန်ဘုရားကျောင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစင်တာ
FCHC သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးကြောင်းကြေငြာခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူသည် Telehealth သင်၏ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချစောင့်ရှောက်မှုချိန်းဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်။ Telehealth သင်၏ဆေးကုသမှုသမိုင်းကိုသင်နှင့်အတူပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ သင်၏ရွေးချယ်မှုများကိုကျော်။ သင်မေးကောင်းမေးနိုင်သောမည်သည့်မေးခွန်းမဆိုဖြေဆိုရန်သင့်အားလူနာပညာပေးသူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သင့်အားခွင့်ပြုသည် - သင်အဆင်ပြေမည့်အချိန်နှင့်နေရာတွင်! ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာပိုမိုထွက်ရှာပါ Telehealth စာမျက်နှာ.
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်း - နိုးလော့ (၁၂ ပတ်မှတစ်ဆင့်)
မင်းက မ IV Sedation ရှိရင်နိုးပါလိမ့်မယ် - သင်တို့သည်ဤမျှ နိုင်: